Barnaamijka dar dargalinta Mac-hadka diiniga ee Burtinle
28/08/2009 - 09:01:00 Featured 0 3733 Super Admin
Mac-hadka diiniga ee Buurtinle waxaa la furay 1998kii, xarunta mac-hadkana waxaa dhisay Bankiga Islaamiga, kharshkiisana waxaa wada bixin jirtay hay'adda Al-Muntadaa Al-islaami; sidaa darteed waxbarshada mac-hadku waxay ahayd lacag la'aan muddada dheer ee uu furnaa.
Boston Islamic Center o lasoo wareegtay Dhulka Masjidka Cusub
11/08/2009 - 23:53:37 Featured 0 4232 Super Admin
Boston Islamic Center ayaa waxay ugu danbayntii lasoo wareegtay dhulkii muda dheer lasugayey ee loogaday Masjidu-Taqwaa. dhulkaan ayaa waxaa uu ka kooban yahay 27,000 ft sq. waxaana uu kuyaalaa center-ka Boston xaafada Roxbury oo udhaw save A-LOT. Address-ka dhulka waxaa uu kuyaalaa 63 PERRIN ST ROXBURY…
Attaqwa FC Sweeps Lewiston, Maine FCTeam in a Re-match
10/08/2009 - 07:11:01 Featured 0 1585 Super Admin
Indeed, yesterday was a day when Attaqwa Football Team has heeled from the demolition defeat we have been given in eastern Maine city of Lewiston about a month ago when we visited there for the 3rd Semi-Annual conference of Students of New England Masjids.
Minnesota welcomed MP Of The DFKM, Marwo Fadumo Daahir Aadan.
03/08/2009 - 08:10:42 Featured 0 3950 Super Admin
Waxaa maalintii sabtida taariikhdu aheyd july/25/2009 ka dhacay magaalada minneaplois xaflad soo dhaweyn diiran tasoo lagu soo dhaweeyey marwo Faadumo Daahir Aaadan oo ah xildhibaanad ka mid dowlada Federaalka ee soomaliya. Xildhibaanada ayaa booqosho ku soo gaartay magaalada Minneapolis halkaas oo…
XURMADDA QOFKA MUSLIMKA IYO CADDEYNTA XAQIISA
10/07/2009 - 08:38:03 Featured 0 1786 Super Admin
Alle weyne kor ahaaye wuxuu yiri:
FEAR of RELIGIOUS WAR-LORDS
05/07/2009 - 07:58:20 Featured 1 1802 Super Admin
Since the Somali State had collapsed in january,1991, the destruction which took place was enormous. When Somalia descended into chaos and war- lords who were gangs and mercyless terrorized civilians in Mogadishu, and other parts of the counry, religious people were doing the best they could to save…
Sawiro Cusub oo naga soo gaaray Masjidka Xaarxaar
28/05/2009 - 12:08:21 Featured 0 18264 Super Admin
Waxaa nasoo gaaray Sawiro cusub oo laga soo qaaday dhismayasha Masjidka iyo Schoolka ee Magaalada Xaarxaar. Mashruuca Dhismayaashaan waxaa uu ku dhawyahay gab-gaabo,Hadii ay jiraan cid rabta in ay wax ku darsadaan halasoo xiriiraan Maamulka si aan ugu xirno hawlwadeenada Mashruuca. walaalaha ku hawlan…
Tarriikhdii Carays Ciise Kaarshe
20/04/2009 - 10:53:28 Featured 17659 Super Admin
Careys Ciise Kaarshe oo ahaa saaryahan weyn oo Soomaaliyeed wuxuu ku dhashay " La-helay " oo ku taal Gobolka Jubada Hoose, 20km Kismaayo dhanka Galbeed ka xigta.
Taariikhdii Geele Mohamed Kaneec
20/04/2009 - 10:49:25 Featured 0 5643 Super Admin
Geele Mohamed Kaneec wuxuu ku dhashay degmada Jiriiban sanadku markuu ahaa 1900, wuxuu ku garay deegaan kaas ilaa 12 sano
20/04/2009 - 10:39:00 Featured 1 26244 Super Admin
Haji Dirie Hirsi was a Somali nationalist advocating since the mid-thirtieth for Somali independence under Somali aristocratic government. He gave voice to this conviction towards the United Nation's fact finding commission in January 1948. As the leading Somali representative of the Chamber of…